ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှု Repair (ANKARAY စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Business ဂိုဒေါင်လမ်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လှေကား၌ပါရှိသောရွေ့လျား, ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်း) ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Repair (ANKARAY စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Business ဂိုဒေါင်လမ်း, ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားနှင့်မသန်စွမ်းလမ်းလျှောက်ခြင်း, တူရကီက Metro ဘူတာနှင့်လှေကား၌ပါရှိသောရွေ့လျား)
01 / 11 / 2016 Levent Ozen လေလံပွဲ, အတ္တ, အထွေထွေ, SERVICES လေလံ, Institute, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ 0
ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktırကို Maintenance နှင့် Repair
ANKARAY အုပ်ချုပ်ရေး (A1 လိုင်း) နှင့်တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှု (M1, M2, M3 Lines) ဂိုဒေါင်နှင့်လမ်းမကြီး (Band) လမ်းလျှောက်ခြင်း, ဘူတာရုံမှာစက်လှေကားတွေ့မသန်မစွမ်းနှင့်အတူမသန်စွမ်းသူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားပလက်ဖောင်းလစဉ်ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးန်ဆောင်မှု 4734 ဝယ်ယူရန်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရေတွက် 19 ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပိုဒ်အညီပညတ်တရားအားဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 431474
က) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီ
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.t
779 ကလောင် ANKARAY အုပ်ချုပ်ရေး (A1 လိုင်း) နှင့်တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှု (M1, M2, M3 Lines) ဂိုဒေါင်နှင့်လမ်းမကြီး (Band), လစဉ်ကို Maintenance နှင့်မသန်မစွမ်းပလက်ဖောင်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်အတူမသန်စွမ်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကား၏ပြုပြင်ရေးလမ်းလျှောက်, ဘူတာရုံမှာစက်လှေကားကိုတွေ့
ခ) Place: ANKARAY အုပ်ချုပ်ရေး (A1 လိုင်း) နှင့်တူရကီက Metro စီမံခန့်ခွဲမှု (M1-M2-M3 Lines) ဂိုဒေါင်နှင့်လမ်းမကြီး (Band), မသန်မစွမ်းပလက်ဖောင်းလစဉ်ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်း Related န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူမသန်စွမ်းသူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဓါတ်လှေကားလမ်းလျှောက်, ဘူတာရုံမှာစက်လှေကားကိုတွေ့ ကြားနာ၏ဝယ်ယူမှု။ တူရကီ။
ဂ) Duration: နေ့စွဲ 01.01.2017, 31.12.2018 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
က) Place: ရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန Mah ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်52 Block ။ ကြမ်းပြင် Yenimahalle / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 07.12.2016 - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီက Metro ဘူတာနှင့် Ankaray မသန်စွမ်းအတွက်စက်လှေကားနှင့်လှေကားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ပြီးပြီချီ 23 / 01 / 2013 အတ္တကိုနူးညံ့နေ NAME တူရကီက Metro နှင့် Ankaray ဘူတာရုံရဲ့စက်လှေကား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုများနှင့်မသန်စွမ်းဓါတ်လှေကားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်နူးညံ့ THE တူရကီက Metro နှင့်စက်လှေကား၏အကျဉ်းချုံးဖော်ပြချက်နှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 ၏ Ankaray ဘူတာဆောက်လုပ်ရေး၌ပြစ်မှားမိမသန်စွမ်းဓါတ်လှေကားပြုသောအမှု။ ပစ္စည်းဥစ္စာဖွင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်တင်ဒါလိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များနေသောခေါင်းစဉ်: စာချုပ် UNIT ရထားလမ်းစနစ်ဌာန JCC REGISTRATION NO 2013 / 3369 လေလံအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (။ 19 တ္ထုများ) Administration ရဲတပ်ဖွဲ့ခရိုင်ပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမနှင့်လိပ်စာ: YENİMAHALLEတူရကီအာဏာပိုင်များပုံတယ်လီဖုန်း506330 312 Administration မှ 507 1087 ဖက်စ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Keçiören၏ AKM လိုင်းစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားကို Maintenance တှငျတှေ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘူတာ Repair ရရှိထားပါလိမ့်မည် 12 / 02 / 2018 န်ဆောင်မှု4အမှတ်လိုင်းဘူတာန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှာတွေ့ရှိစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကား၏လစဉ်ပုံမှန်ကို Maintenance - Keçiören AKM ဘူတာကို Maintenance တှငျတှေ့စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကား၏ Line နဲ့ဝန်ဆောင်မှု Repair ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro Inns M4734 LINE (TSS keçiören) ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 သည်နှင့်အညီအပိုဒ်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 37222 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဝန်ထမ်းရေးရာ Service ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Metrobus အဆိုပါလိုင်း၏ Guardrail အစားထိုးတွေ့ရှိခဲ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံသယ Ankaray ဘူတာအောင်အတွက်တူရကီက Metro နှင့်တွေ့ရှိခဲ့စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားစီမံကိန်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Keçiören၏ AKM လိုင်းစက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားကို Maintenance တှငျတှေ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘူတာ Repair ရရှိထားပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: M1 လိုင်းဓါတ်လှေကားနှင့်စက်လှေကားကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır Repair
rayhab Tube Videos မ